အသက်(၆၀) မှာ သာသနာ့ဘောင်ထဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာကြည်ဖြူသျှင် – Myanmar Update News
July 13, 2020news uptodate0 Comments
ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင်ဟာ အနုပညာအလုပ်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး သာသနာ့ဘောင်ထဲ ဝင်တော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အာင်မြင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဒါရိုက်တာကြည်ဖြူသျှင်ကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေ စွန့်လွှတ်ပြီးသာသနာ့ဘောင် ထဲအပြီးတိုင် ဝင်ရောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပါပြီ။အသက် (၅၅) နှစ်မှာ ဒါရိုက်တာ အလုပ်တွေ မလုပ်တော့ဘူးလို့ ဆိုလာပါတယ်။
“ကျွန်မရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ အသက်(၅၅) နှစ်အထိပဲ ဒါရိုက်တာအလုပ် ကိုလုပ်မယ်။ အသက် (၅၅) နှစ် ကနေ (၆၀) နှစ် အထိ အများနဲ့သက်ဆိုင်သော လူမှုရေး ပရဟိတကိစ္စတွေ နိုင်သလောက် လုပ် မယ်။ အသက်(၆၀) ပြည့်တာနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လောကီပင်စင်
အပြည့်ပေးပြီး သံသရာခရီးတိုဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ပါမည်။ (လူဆိုသည်မှာ ဘယ်နေ့သေမလဲဆိုတာမသိနိုင်၍ ခုအရွယ်မှာလဲပုံမှန်(၁) နှစ်(၃)ကြိမ် တရားစခန်းဝင်ရင်း ၊ နေ့စဉ်လည်း ရလောက် အားထုတ်သွားရပါမည်။) အသက်(၄၄) နှစ်(၆)လအတွေး…. ကြည်ဖြူသျှင်” ဆိုပြီးတော့
ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင် ဟာ အခုဆိုရင် အသက် (၄၄) နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူမက ဆရာတော် ဥူးကိတ္တိသာရ( သရုပ်ဆောင် ကျော်ဟိန်း) ကို အတုယူနိုင်ဖို့ တွေးရင်း
အခုလို ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တာလို့ ဆိုပါတယ်။အကြောင်း အတုယူနိုင်ဖို့တွေးမိရင်း ကျွန်မကတော့ အပျိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကံကောင်းစွာဖြင့် အခက်ဆုံးကြိုးကို ဖြတ်ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး” ဆိုပြီးတော့ ဆက်လက် ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင်ဟာ
၁၉၉၇ ခုနှစ်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲမှာ ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကိုယ်တိုင် ဇာတ်ညွှန်းလည်းရေးသလို ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရုပ်ရှင်ကားကြီး၊ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဂျပန်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအဖြစ် ရိုက်ကူးထားတဲ့ “ဇာတိမြေ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ ဖန်တီးသူ တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး
ဒါရိုကျတာ ကွညျဖွူသြှငျဟာ အနုပညာအလုပျကို စှနျ့လှတျပွီး သာသနာ့ဘောငျထဲ ဝငျတော့မယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အာငျမွငျမှုတှေ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဒါရိုကျတာကွညျဖွူသြှငျကတော့ အနုပညာ အလုပျတှေ စှနျ့လှတျပွီးသာသနာ့ဘောငျ ထဲအပွီးတိုငျ ဝငျရောကျဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြ ခလြိုကျပါပွီ။အသကျ (၅၅) နှဈမှာ ဒါရိုကျတာ အလုပျတှေ မလုပျတော့ဘူးလို့ ဆိုလာပါတယျ။
“ကြှနျမရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကတော့ အသကျ(၅၅) နှဈအထိပဲ ဒါရိုကျတာအလုပျ ကိုလုပျမယျ။ အသကျ (၅၅) နှဈ ကနေ (၆၀) နှဈ အထိ အမြားနဲ့သကျဆိုငျသော လူမှုရေး ပရဟိတကိစ်စတှေ နိုငျသလောကျ လုပျ မယျ။ အသကျ(၆၀) ပွညျ့တာနဲ့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ လောကီပငျစငျ
အပွညျ့ပေးပွီး သံသရာခရီးတိုဖို့ကွိုးစားအားထုတျပါမညျ။ (လူဆိုသညျမှာ ဘယျနသေ့မေလဲဆိုတာမသိနိုငျ၍ ခုအရှယျမှာလဲပုံမှနျ(၁) နှဈ(၃)ကွိမျ တရားစခနျးဝငျရငျး ၊ နစေ့ဉျလညျး ရလောကျ အားထုတျသှားရပါမညျ။) အသကျ(၄၄) နှဈ(၆)လအတှေး…. ကွညျဖွူသြှငျ” ဆိုပွီးတော့
ဇူလိုငျလ ၁၂ ရကျနေ့ မနကျပိုငျးက သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။ဒါရိုကျတာ ကွညျဖွူသြှငျ ဟာ အခုဆိုရငျ အသကျ (၄၄) နှဈကြျောလာပွီဖွဈပါတယျ။ သူမက ဆရာတျော ဥူးကိတ်တိသာရ( သရုပျဆောငျ ကြျောဟိနျး) ကို အတုယူနိုငျဖို့ တှေးရငျး
အခုလို ဆုံးဖွတျခကျြ ခလြိုကျတာလို့ ဆိုပါတယျ။အကွောငျး အတုယူနိုငျဖို့တှေးမိရငျး ကြှနျမကတော့ အပြိုကွီးဖွဈနတေဲ့အတှကျကံကောငျးစှာဖွငျ့ အခကျဆုံးကွိုးကို ဖွတျဖို့ မလိုတော့ပါဘူး” ဆိုပွီးတော့ ဆကျလကျ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ ဒါရိုကျတာ ကွညျဖွူသြှငျဟာ
၁၉၉၇ ခုနှဈကတညျးက အနုပညာလောကထဲမှာ ဒါရိုကျတာ တဈယောကျအဖွဈရပျတညျလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ကိုယျတိုငျ ဇာတျညှနျးလညျးရေးသလို ဒါရိုကျတာအဖွဈ ရုပျရှငျကားကွီး၊ ဗီဒီယို ဇာတျကားတှေ ရိုကျကူးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။
ဂပြနျ- မွနျမာ ခဈြကွညျရေးအဖွဈ ရိုကျကူးထားတဲ့ “ဇာတိမွေ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးရဲ့ ဖနျတီးသူ တဈယောကျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။
source- Duwun Cele YatKwat